Sida looga hortago shilalka Metrobus | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulSidee looga hortago shilalka metrobus
05 / 05 / 2016 34 Istanbul, tareenka, GUUD, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Metrobus, TURKEY
Sidee looga hortago shilalka BRT: Khubarada ayaa ka digay shilalka BRT ee dhawaanahan kordhay, "Darawaliintu way daalan yihiin, waddooyinka lama qorshayn. Metrobus mitirka deg-degga ah iyo nidaamka gawaarida si toos ah waa in la keenaa ...
WRI ee Turkey iyo İETT uu cilmi-baarista sida 5 2010 shilalka sano Metrobus -2014 May 96, 2015 xnumx't shilka ka dhacay oo ku saabsan 10 sano 5 murunka shilka, oo ay ku jiraan darawalkii. 106 waxay ahaayeen shil aan caadi ahayn. Shilalka dhimashada waxay ahaayeen Okmeydanı, Perpa, Acibadem, Caglayan, Beylikdüzü, Janno, Yenibosna, Sefakoy. Waxaa la arkay in inta badan shilalkan ay ka dhaceen sababtoo ah saameynta dhabarka danbe ee hore ee baaskiilka. Laakiin waa maxay qarsoodiga shilalka aan laga hortagi Karin metrobus? Shilalka la xiriira darawalka waxaa sababa xaalado shaqo ama dhibaatooyin wadada. Khubarada ayaa sharaxaya sababaha iyo xalalka shilalka BRT ...
'Nidaamka gawaarida waa inuu ahaadaa mid toos ah'
Wadooyinka Wadooyinka iyo Wadooyinka Nabadgelyada Wadooyinka Der. Madaxwayne Ihsan Memish: Darawallada ku yaal Ankara waxay isticmaalaan mitirka saacadda 6. Magaalada Istanbul, darawaladu way ka daalaan, saacadaha shaqada waa la diyaarin karaa. Daalka duufaanka ayaa xakameynaya xakamaynta dabagalka dabagalka iyo wadida wadooyinka toosan. Nidaamka gawaarida si toos ah ayaa muhiim u ah. Meelaha raadraaca gaadiidka ee Japan way ka duwan yihiin xagaaga marka loo eego dhinaca kale. Xilliga jiilaalka waxaa jira baraf, qoyaan wadooyinka iyo masaafada oo lagu qiyaaso iftiinka laysarka. Xalkan ayaa xaddidaya dhibaatada aaney arag baabuurka hor u ah sababtoo ah qiiqa. 30 ayaa ka digtey in ay jiraan gawaarida mitrooga gudaha. Waxaan u baahanahay xalal sidan oo kale ah.
'Kabuubyadu waa cidhiidhi, oo aad u adag in laga baxsado halista
Gaadiidka iyo Wadada Wadada. Engineer sare Suat Sari: Dhallinyaro ayaa cidhiidhi ku ah matoorada. Nidaam aan nidaamsaneyn oo BRT lama dhisi karin. Sidaa daraadeed, ma jirto aag meesha darawalku ka baxsanayo oo yareeyo halista haddii ay dhacdo shil. Intaas waxaa sii dheer, liisanka darawalnimada ugu yaraan sanadkiiba 40. Xakamaynta, kormeerka lama bixinayo. Talyaaniga, baabuurta 13 si toos ah ayey u xiran yihiin dhammaadka saacadda. Wakhtiga shaqada ee maalin kasta ee baabuurkaasu dhamaato. Laakiin ma naqaano inta saacadood ee ay socoto. Dabadeed daboolka ayaa soo baxaya, dabku wuxuu soo noqdaa shil mar kale. Waxaa lagama maarmaan ah in la dhigo xawaaraha xawaaraha ee BRT oo yareeyo culeyska aadanaha.
'Shaqo ayaa loo qabtaa si looga hortago shilalka'
Caqabadaha ITU Nabadgelyada Dr. Cali Cusmaan Atahan: Nidaam loo isticmaalo marar badan ayaa sidoo kale u muuqda inuu shil yimaado. 800 kun qof ayaa isticmaala metrobus. Mid ka mid ah hababka ugu badan ee loo adeegsado gaadiidka. Haddii shilku hoos u dhaco, adeegga la bixiyay waa mid aad u ballaaran. Waxaan ka shaqeyneynaa hababka lagama maarmaanka u ah xalinta shilalka. Shaqada sidoo kale waxay socotaa beddelidda caqabadaha xannibaadda iyo asfaltiga. Daraasaddan, shilalka ayaa laga yaabaa inaan si buuxda looga hortagin, laakiin waxay keeni kartaa yareynta shilalka dhimashada.
'Rakaabo badan ayaa la qaadaa marka loo eego'
Kormeeraha Taraafikada Taraafiglaha ah ee Baarlamaanka Shirkadda Kalifayta ah: Waddooyinka jira ayaa kala qaybsan. Markaad ka fekereyso dhererka matoorka waxay ka shaqeeyaan waddo aad u cidhiidhi ah. Waxaa jira rakaab ka badan inta uu noqon lahaa. Saacadaha shaqada waa in sidoo kale la hagaajiyaa. Sharciga wadada gaadiidka 2918 wuxuu sharaxay saacadaha si uu u socdo kursiga gawaarida. Laakiin kuwani waa shilalka la xiriira darawalka iyo maskaxda "Shaqadani waxa la raacayaa wakhtiga? Shaqada ayaa kicisa su'aasha. Metrobus, suurtagalintan ayaa keeneysa dhibaatada ugu weyn, shil.
Sidee looga hortagaa shilalka heerarka isgoyska
Abuurista dakhliga shilalka Metrobus
Waa kuwan soo-ururinta miisaaniyada shilalka BRT
Sharraxaadda shilalka Metrobus ee ka socda MMO
Gawaarida ka Hortaga Shilalka Gawaarida mitir Nidaamka Digniinta ugu Horreysa ayaa la rakibi doonaa
Guul darrooyinka Metro, shilalka Metrobus Imamoglu ee ka dhanka ah Sabotage Insidious
Sidee bay dadka naafada ah u gaari doonaan Saldhiga Altunizade Metrobus?
Sidee mashruuca Metrobus uga qayb qaatay saxaafadda Pakistan
Qorshaha Miisaaniyadda Dalxiiska ee loogu talogalay Diyaarad Ski ah ee Tokat
Daarad ayaa lagu riixay URAYSİM